Mbelata caloric - kedu ihe ọ bụ na kedu ka m ga -esi ruo ebe ahụ? Bezzia
Mbelata caloric: gịnị ka ọ bụ na kedu ka m ga -esi mee ya?
Susana godoy | | Nkwere maka enyemaka
N'ezie ị nụla aha ya ugboro ugboro na ọ bụghị ihe ijuanya. N'ihi na ọdịnaya caloric ọ bụ usoro nke ụbọchị na ndụ anyị. Ebe ọ bụ na n'ime ya anyị na -achọ mgbe niile idobe ezigbo ibu, na -ezere ịdị elu karịa mana ịghara imebiga ya ókè, yabụ anyị chọrọ ozi ndị ọzọ gbasara usoro a.
Ọ bụ ezie na ọ na -ada ka ọ gbagwojuru anya, ọ naghị esiri ya ike. Naanị ị ga -ejikwa calorie ị nwere ike iri n'otu ụbọchị ekwekwala ka ndị nke gị karịa, iji kwuo ya n'ụzọ siri ike. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmata ọtụtụ ihe na nke ọma, echefula ihe niile anyị na -agwa maka na ọ ga -amasị gị nke ukwuu.
1 Kedu ihe kalori deficit pụtara
2 Kedu ka ị ga -esi mara ihe m nwere kalori
3 Etu ị ga -esi mebie kalori na -enweghị mmega ahụ
4 Basic Atụmatụ iburu n'uche
Kedu ihe kalori deficit pụtara
Anyị na -abanye n'ụzọ zuru oke n'ime ihe ọ pụtara, ebe a ị ga -aghọta ihe niile nke ọma. N'ihi na mpekere kalori na -eri obere ume karịa ka ị ga -eji. N'ihi ya, anyị nwere ike chịkọta ya dị ka ihe na -ere ọkụ karịa ka anyị na -eri, ka nke a wee mee ka ịdị arọ ghara ịga n'ihu ịrị elu. N'ezie, ọ dị mkpa na n'ime nke a, anyị nwere nri zuru oke yana nke ziri ezi. Anyị ga na -agbaso ntuziaka nke mpekarị nke anyị nwere, maka na ọ bụghị anyị niile kwenyere na ya.
Kedu ka ị ga -esi mara ihe m nwere kalori
Iji mara ihe mpe gị ga -abụ, o doro anya na anyị ga -ebu ụzọ mara ihe bụ kalori anyị kwesịrị inwe iji nwee mmetụta na ahụ ike zuru oke. Ọ bụ eziokwu na enwere ụzọ dị iche iche iji mara ihe mpe gị bụ mana otu n'ime ihe kachasị ọsọ na dị mfe bụ mụbaa ịdị arọ gị site na 26 wee dee ọnụ ọgụgụ na -enye gị. Mgbe ahụ ị ga -amụba ịdị arọ gị site na 28 ọzọ, ọ ga -enyekwa gị, n'ụzọ ezi uche, ọnụọgụ ọhụrụ. Nke a pụtara na n'agbata ọnụọgụ nke mbụ o nyere anyị na nke abụọ bụ kalori kwa ụbọchị. Anyị ga-ekwu maka etiti. Yabụ, site ebe ahụ, anyị ga -ewepụ mgbatị ahụ ma melite ụkọ anyị mgbe niile site na iji protein dị mma, yana carbohydrates dị mgbagwoju anya na n'ezie, nwere abụba dị mma.
Etu ị ga -esi mebie kalori na -enweghị mmega ahụ
Ọ bụ eziokwu na ọ bụ usoro ebe anyị na -emefu nnukwu ego n'ihi na anyị kwesịrị ime mmega ahụ kwa ụbọchị. Mana ọ bụrụ n'ezie na ịnweghị ike, maka ihe kpatara ya, enwere ngwọta mgbe niile. N'otu aka, anyị na -atụ aro ka ị na -a aụ nnukwu mmiri ma ọ bụ, na -emezughị nke ahụ, were infusions. Ewepụla abụba na nri gị, mana ị kwesịrị ịhọrọ nke kacha dịrị ahụike ma were obere akụkụ kwa ụbọchị. Na mgbakwunye, nri gị ga -abụrịrị akwụkwọ nri yana nri ọhụrụ n'ozuzu ya. Cheta na ị ga -achọkwa akụkụ nke protein, ọ dịkwa ka abụba, ha ga -emechakwa efere gị. Ugbu a, ị ga -ahazi ego ahụ. Maka nke a, ọ bụ ihe amamihe dị na ya iri nri ọtụtụ ugboro n'ụbọchị iji nwee ike nwee afọ ojuju zuru oke na ịghara iri nri mgbe ụfọdụ na ndụ anyị.
Anyị chọrọ iru mmeju nke kalori mana na -agabigaghị ókè. Anyị ekwesịghị ime ihe nzuzu n'ihi na ha ga -emerụ ahụ anyị na ndụ anyị. Cheta nke ahụ oriri kalori ekwesịghị ịdị oke ala n'ihi na nchekasị nwere ike ịbata na ndụ anyị yana kwa mfu nke anụ ahụ.
Dịka ị maara nke ọma, anyị ekwesịghị ichere ruo mgbe agụụ gụwara anyị ịmalite iri nri. Ọ ka mma mgbe niile ịme ya na nkesa ekesa ma na -achịkwa maka na anyị ga -ezere ịkụ binging. Na mkparị site n'oge ruo n'oge ọ nweghị ihe ga -eme, ọ ga -enyekwa anyị mkpali ọzọ. Na -ejikọ cardio mgbe niile na igwe, ebe ebumnuche ga -aka nke ọma ma ị ga -achọpụta ya ngwa ngwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ahụike » Nkwere maka enyemaka » Mbelata caloric: gịnị ka ọ bụ na kedu ka m ga -esi mee ya?
Aghụghọ iji wepu akwụkwọ ahụaja na mgbidi
Ndụmọdụ ka ị bụrụ gburugburu ebe obibi kwa ụbọchị